Global Voices teny Malagasy » Bilaogera Shinoa Notànana Rehefa Avy Nataon’ny Polisy Famotorana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Marsa 2013 17:21 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Notànana ilay poety Shanghai rehefa avy nataon'ny polisy Shinoa famotorana taorian'ny fandefasany lahatsoratra tao amin'ny bilaogy madinika malaza Sina Weibo, izay miantso ireo mpanaraka azy hiara-hirona hitsangatsangana manamorona ny renirano Huangpu ho fanairana ny saina ao amin'ny lalan-drenirano izay nahitana vao haingana ireo fatinà kisoa 15.000  nitsingevana .
Tamin'ny voalohany nahitana  ireo fatinà kisoa tamin'ny 7 Martsa 2013, nanjary lohahevitra malaza iadian-kevitra amin'ny aterineto ny loza momba ny fahafatesan'ireo kisoa sy ny tahotra amin'ny mety hahaloton'ny rano mandeha amin'ny paompy. Nandefa sary mandatsa  hamazivaziana ny toe-draharaha ireo mpiserasera, ary nametra-panontaniana mikasika ny fitantanan'ny governemanta izany loza izany.
Taorian'ny lahatsoratra fohy nalefan'ilay poety mivantambata-piteny Pan Ting y tamin'ny 14 Martsa 2013, izay miantso ireo mpanaraka azy 50.000 hitsangatsangana manaraka ny Renirano Huangpu [zh], mbola notànan'ny polisy ihany izy ary voarara tsy hiditra ao amin'ny Weibo, na dia nanambara aza fa midika ho “tena fitsangatsangana” tsy misy sora-baventy na teny filamatra izany.
Fotoana fohy taty aoriana, tonga tany an-tranony ireo polisy. Noterena hanome ireo fitaova-pifandraisana teny aminy i Pan ary niara “nisotro dite ” tamin'ireo polisy, fiteny fampiasa hanehoana “famotorana ataon'ny polisy” mikasika ny asa na ny zavatra ataon'ny olona amin'ny aterineto ny hoe “nisotro dite ”.
Rehefa navotsotra izy, naneho hevitra tao amin'ny kaontiny Weibo hafa “Pan Ting's backyard ” [zh] i Pan:
Pan nanoratra hoe  [zh]:
Maro ireo mpisera Weibo no naneho ny fanohanany an'i Pan Ting. Mpanoratra Zhao Chu nanentana b[zh] olona betsaka mba hihaino sy hijery an'i Pan sy ny zava-mitranga aminy:
Mpanoratra Li Minsheng nangataka  [zh] fanazavana momba ny fitànana an'i Pan's detention:
Xu Qiuhong nanakoako hoe  [zh]:
Raha maro ireo nanohana an'i Pan Ting, nametra-panontaniana ny amin'ny tsy fisian'ny feon-dehilahy mikasika ity toe-draharaha ity ny sasany. Mpisera Weibo sasany no diso fanantenana manokana tamin'ireo olo-malaza roa amin'ny aterineto Han Han  sy Zhou Libo  noho ny fanginan'izy ireo mikasika ity toe-draharaha ity. Mpanao gazety ara-panatanjahatena “Lanzhou Banzhuan Ershi ” [zh] nitsikera ireo lehilahy Shanghai:
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nametra-panontaniana ny Seeing Red in China  mikasika ny antony mahatonga ireo mponina Shanghai mangina manoloana ny tahotra amin'ny mety hahalotoan'ny rano. Angamba anisan'ny antony mampangina azy ireo ny fitànana an'i Pan Ting.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/22/47083/
 sary mandatsa: http://chinadigitaltimes.net/2013/03/drawing-the-news-life-of-pig/
 hitsangatsangana manaraka ny Renirano Huangpu : http://www.rfa.org/mandarin/Xinwen/Zhujiangzhiyue-03152013054725.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
 nisotro dite: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2013/02/19/china-bloggers-forced-to-drink-tea-with-police/